267s Na-eme 9th narị afọ Iraqi lustreware nnukwu oyiri images and subtitles
Abụ m Andrew Hazelden na abụwo m ọkpụite kemgbe ihe karịrị afọ iri atọ. Echere m na otu n'ime ihe ndị na - atọ ụtọ na akụkọ ihe mere eme bụ na ha na-eke ọla edo nke na-abụghị ọla edo ewee chere na ha bu ndi inye aka. Ọ dị gị ka ị nwere ike ịbanye na ke ndise ubian utem uto nke a na - eme ka ị chee na ị nọ n’ụwa ọzọ. Luster bụ usoro ebe ị na-eji sulphides ọla imepụta oghere dị n’elu ite. Ọ bụ usoro dị oke omimi ma sie ike. Iko a bụ otu okike nke Iraq nke 9 narị afọ. Eji m ya rụọ ọrụ na-eme ka nnukwu efere a site na Deruta nke bu agba agba. M wee were bọọlụ ụrọ dị ihe karịrị kilogram na kilogram n’arọ ka etinyere ya n’elu ọkpụite enwere ike iji nkeji ise tuo udi a. Ọ fọdụghị ụbọchị ole na ole iji nweta akpụkpọ anụ siri ike. Ozugbo ọ siri ike na akpụkpọ anụ, ọ tụgharịrị nakwa na ụkwụ ga-atụgharị. Ozugbo emere ntụ-aka ahụ, ọ ghaghị akpọnwụ kpamkpam ma emesịa ọ nwere egbe izizi ya nke ọ bụ bisikiiti na-agba emesia ewere ya ma tinye ya na glaze ọcha nke bụ nke kariri oxide iji mee ka ọ dị ọcha emesịa gbaa ya ọkụ ọzọ. Usoro na-esote ya bụ iji ụcha luster tee ya. A na-eji ụrọ sulphide ọla mee m ụrọ a na-eji agba ya mana o nwekwara ụfọdụ ọla ọcha n’ime ya ọ ga-eji ọla ọcha na ụrọ mee ya. A na - edobe ya ka ọ gbajụọ ihe dị ka okpomoku - 650 centigrade. Mgbe akachara ya aka ma ewere ya ma ala ma gwakọtara ya na mmanya ahụ na ọ bụ mgbe ahụ ka eserese ya. Edere ntụpọ ntụpọ ahụ site na nnukwu ọkwa Iraq nke narị afọ nke 9. N’ezie ka esi edozie brushes ha jiri jiri blọọgụ mee ya. Onye na-anyụ egbe ga-achọ nkụ nke nwere ikike nke belata ikuku oxygen ị na-achọ ịmepụta ikuku ebe ikuku oxygen na-adịghị nke na-ebelata iberibe iji wepụta ọla ọcha na ọla kọpa. Mepụtara anwụrụ Izọ m na-eme nke ahụ bụ ịtọpịa obere iberibe osisi n'ime ite n'ime oghere nzuzo na nke ahụ na-achụpụ oxygen. Mgbe ahụ ị na-ahapụ ikuku oxygen ka ịlaghachi ebe dị mkpirikpi iji kpochapụ ụlọ ahụ nakwa na iji mmanụ na-agbaze na obere nkụda mmụọ dị mkpa iji mepụta oghere na ite. Mgbe ite siri n’ime ite aputa aputa ihe n’ile, odi ya ka odi n’azu kpuchie ya na ụrọ then ga-etere ocher jiri ihe mkpochapu. Then ga-amata mgbe ahụ ma egbe ọfụma ahụ arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ rụghị maka na ọ bụrụ na ọ rụọla ọrụ, ị ga - ebido hụ ụzọ na-acha uhie uhie ma ọ bụ ọla ọcha. Yabụ na nke ahụ bụ ihe kachasị anwansi bụ ikpochasị ite n'ọkụ mgbe agbasasịchara ị maghị mgbe ihe ga-eme na nsonaazụ ya abụghị amụma mana ọ bụ iridescence yiri ka ọ nwere ndụ nke ya. Sometimes ga-egwerite ite ahụ rue n'ọkụ ka ị hụ ọzịza ya mere dabere na akuku ị jidere ite ahụ dabere ma ị na-ahụ uzo ma ọ bụ na ị hụghị. Yabụ na ọ dị ka ihe dị omimi na-eme
Na-eme 9th narị afọ Iraqi lustreware nnukwu oyiri
< start="7.76" dur="5.24"> Abụ m Andrew Hazelden na abụwo m ọkpụite kemgbe ihe karịrị afọ iri atọ. >
< start="13" dur="3.96"> Echere m na otu n'ime ihe ndị na - atọ ụtọ na akụkọ ihe mere eme >
< start="16.96" dur="2.42"> bụ na ha na-eke ọla edo >
< start="19.38" dur="2.2"> nke na-abụghị ọla edo >
< start="21.58" dur="2.8"> ewee chere na ha bu ndi inye aka. >
< start="24.38" dur="1.92"> Ọ dị gị ka ị nwere ike ịbanye na >
< start="26.3" dur="2.96"> ke ndise ubian utem uto >
< start="29.26" dur="5.4"> nke a na - eme ka ị chee na ị nọ n’ụwa ọzọ. >
< start="34.66" dur="5.28"> Luster bụ usoro ebe ị na-eji sulphides ọla >
< start="39.94" dur="4.8"> imepụta oghere dị n’elu ite. >
< start="44.74" dur="4.06"> Ọ bụ usoro dị oke omimi ma sie ike. >
< start="48.8" dur="6.14"> Iko a bụ otu okike nke Iraq nke 9 narị afọ. >
< start="54.94" dur="7.92"> Eji m ya rụọ ọrụ na-eme ka nnukwu efere a site na Deruta >
< start="62.86" dur="4.8"> nke bu agba agba. >
< start="67.66" dur="1.46"> M wee were bọọlụ ụrọ dị >
< start="69.12" dur="4.48"> ihe karịrị kilogram na kilogram n’arọ ka etinyere ya n’elu ọkpụite >
< start="73.6" dur="7.2"> enwere ike iji nkeji ise tuo udi a. >
< start="80.8" dur="4.58"> Ọ fọdụghị ụbọchị ole na ole iji nweta akpụkpọ anụ siri ike. >
< start="85.38" dur="4.33"> Ozugbo ọ siri ike na akpụkpọ anụ, ọ tụgharịrị nakwa na ụkwụ ga-atụgharị. >
< start="89.71" dur="5.77"> Ozugbo emere ntụ-aka ahụ, ọ ghaghị akpọnwụ kpamkpam >
< start="95.48" dur="5.12"> ma emesịa ọ nwere egbe izizi ya nke ọ bụ bisikiiti na-agba >
< start="100.6" dur="4.54"> emesia ewere ya ma tinye ya na glaze ọcha >
< start="105.14" dur="3.689"> nke bụ nke kariri oxide iji mee ka ọ dị ọcha >
< start="108.829" dur="3.651"> emesịa gbaa ya ọkụ ọzọ. >
< start="112.48" dur="4.16"> Usoro na-esote ya bụ iji ụcha luster tee ya. >
< start="116.64" dur="7.26"> A na-eji ụrọ sulphide ọla mee m ụrọ a na-eji agba ya >
< start="123.9" dur="4.46"> mana o nwekwara ụfọdụ ọla ọcha n’ime ya >
< start="128.36" dur="4.86"> ọ ga-eji ọla ọcha na ụrọ mee ya. >
< start="133.22" dur="6.96"> A na - edobe ya ka ọ gbajụọ ihe dị ka okpomoku - 650 centigrade. >
< start="140.18" dur="3"> Mgbe akachara ya aka ma ewere ya ma ala >
< start="143.18" dur="6.72"> ma gwakọtara ya na mmanya ahụ na ọ bụ mgbe ahụ ka eserese ya. >
< start="150.12" dur="6.06"> Edere ntụpọ ntụpọ ahụ site na nnukwu ọkwa Iraq nke narị afọ nke 9. >
< start="156.18" dur="4.6"> N’ezie ka esi edozie brushes ha jiri jiri blọọgụ mee ya. >
< start="160.78" dur="6.15"> Onye na-anyụ egbe ga-achọ nkụ nke nwere ikike nke belata ikuku oxygen >
< start="166.93" dur="3.59"> ị na-achọ ịmepụta ikuku ebe ikuku oxygen na-adịghị >
< start="170.52" dur="5.68"> nke na-ebelata iberibe iji wepụta ọla ọcha na ọla kọpa. >
< start="176.2" dur="1.46"> Mepụtara anwụrụ >
< start="177.66" dur="6.96"> Izọ m na-eme nke ahụ bụ ịtọpịa obere iberibe osisi n'ime ite n'ime oghere nzuzo >
< start="184.62" dur="2.84"> na nke ahụ na-achụpụ oxygen. >
< start="187.46" dur="4.68"> Mgbe ahụ ị na-ahapụ ikuku oxygen ka ịlaghachi ebe dị mkpirikpi iji kpochapụ ụlọ ahụ >
< start="192.14" dur="9.069"> nakwa na iji mmanụ na-agbaze na obere nkụda mmụọ dị mkpa iji mepụta oghere na ite. >
< start="201.5" dur="5.129"> Mgbe ite siri n’ime ite aputa aputa ihe n’ile, odi ya ka odi n’azu >
< start="206.629" dur="2.351"> kpuchie ya na ụrọ >
< start="208.98" dur="8.82"> then ga-etere ocher jiri ihe mkpochapu. >
< start="217.8" dur="5.4"> Then ga-amata mgbe ahụ ma egbe ọfụma ahụ arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ rụghị >
< start="223.2" dur="4.4"> maka na ọ bụrụ na ọ rụọla ọrụ, ị ga - ebido hụ ụzọ na-acha uhie uhie ma ọ bụ ọla ọcha. >
< start="227.6" dur="5.43"> Yabụ na nke ahụ bụ ihe kachasị anwansi bụ ikpochasị ite n'ọkụ mgbe agbasasịchara >
< start="233.03" dur="5.51"> ị maghị mgbe ihe ga-eme na nsonaazụ ya abụghị amụma >
< start="238.54" dur="5.6"> mana ọ bụ iridescence yiri ka ọ nwere ndụ nke ya. >
< start="244.18" dur="7.1"> Sometimes ga-egwerite ite ahụ rue n'ọkụ ka ị hụ ọzịza >
< start="251.28" dur="2.819"> ya mere dabere na akuku ị jidere ite ahụ dabere ma >
< start="254.099" dur="2.421"> ị na-ahụ uzo ma ọ bụ na ị hụghị. >
< start="256.52" dur="7.42"> Yabụ na ọ dị ka ihe dị omimi na-eme >